Caymiska Life inta badan waa lagama maarmaan marka aad ka fiirsan xaqiiqda ah in wax si lama filaan dhici - matalan khasaare lama filaan ah nolosha of walalihii ah. The primary value of any life insurance policy is that it provides financial protection for your family if you ...Read More
Marka aad ka fikirto suddenness wixii dhacdooyin dhacaan oo qof ayaa u dhinta, waxaad Ogaan sida loogu baahan yahay yeesho siyaasado caymiska nolosha si loo ilaaliyo dadka aad jeceshahay in ay dhacdo ixtimaalka kasta. Falanqaynta kama dambays ah, life insurance policies do not only protect ...Read More
Weligaa ma fakarin caymin qaybaha jidhkaaga? Inkasta oo tani lama weli la xaqiijiyey in Nigeria, waxaa la sheegayaa in ay ka fannaan caan Juju, King Sunny Ade, insured his guitar-plucking fingers for huge millions of Naira in case of some dismemberment of these ...Read More
Caafimaadka iyo Caymiska Caafimaadka: Ilaalinta Your Health iyo Life
Odhaahda caadiga ah in "caafimaadka aha xoolahiinnu" hoosta ka xariiqeen sida loogu baahan yahay caymiska caafimaadka caafimaadka iyo. Caafimaadka waa wax walba, oo jirto gebi ahaanba cid waxba ma samayn karo ama loo gaaro iyada oo aan caafimaad fiican iyo dhawaaqa. Weli, caafimaadka qof ayaa ku guuldareysan kara wakhti kasta, imperilling your life ...Read More